Ixesha kunye nabahlobo 2
Ngaba umfundisi welosisi uyakholelwa kwizinyanya? wabuzwa omnye weqela labahlobo kwakudala.
I-Theosophist yamkela zonke izibakala, kwaye ayize ilahle isizathu sayo. Kodwa i-Theosophist ayimisi kwaye iphumle umxholo kunye nenyaniso; izama ukulandela umkhondo kwimvelaphi yayo kwaye ibone imiphumo yako. Inkolelo kukukholelwa okanye ukwenza into ethile ungasazi isizathu. Ngokukhanya ngokubanzi, iinkolelo kukuvuma kwengqondo kwimvelo okanye utyekelo olunxulumene nesenzo esithile ngaphandle kwesizathu sokukholelwa. Iinkolelo zabantu zizinto ezincinci ezifihlakeleyo zolwazi olityelweyo. Ulwazi luhambile, kwaye abo babenolwazi, abantu bayaqhubeka nokuziphatha kweefom; kwaye ke iifom kunye neenkolelo zinikezelwa ngokwesiko ukusuka kwesinye isizukulwane ukuya kwesinye. Njengoko besiya beshenxiswa kulwazi babambelela kufutshane neenkolelo zabo kwaye banokude babe ngabathandi. Inkqubo ngaphandle kolwazi yinkolelo. Ndwendwela iicawe kwisixeko esikhulu ngentsasa yangeCawa. Bona iziseko zonqulo; jonga ukujikeleza kweekwayara; qaphela ubume beofisi yabo baqhuba inkonzo; jonga imifanekiso eqingqiweyo, izihombiso ezingcwele, izixhobo, kunye neesimboli; Mamela uphinda-phindo kunye nefomyula yokunqula kuyo? Ngaba sinokugxeka umntu ongayaziyo yonke le nto ngokuyibiza ngokuba yinkolelo, sisithi singabantu abaneenkolelo? Kungoko sinotyekelo lokujonga iinkolelo zabanye ezingafane zenzeke kakhulu kunabantu bethu. Iinkolelo ezifumaneka kwabo sibabiza ngokuba "ngabangenalwazi" kunye "nabakhohlakeleyo," zimele ukuba zazinemvelaphi. Abo banokwazi kufuneka balandele izithethe okanye iinkolelo kwiimvelaphi zabo. Ukuba bayakwenza oku banokufumana ulwazi, oluchasene nokubonakalisa kwayo okungenangqondo-iinkolelo. Uhlolisiso olungenamkhethe lweenkolelo zakho ziya kutyhila ukuziva ungoyiki kobuqu. Qhubeka nesifundo kwaye siya kukhokelela kulwazi lobuqu.
Sisiphi isiseko senkolelo yokuba umntu ozelwe ene- “caul” unokuba namandla obugqi okanye ubugqi?
Le nkolelo yehla ukutyhubela iminyaka ukusukela mandulo, xa ubuntu bababelana ngesidalwa kunye ngaphakathi kunye nokujikeleza umhlaba. Ke ukubona komntu, ukuva kunye nezinye iimvakalelo zobugqi bangaphakathi, zazikhuselwe kukukhula kubomi obuvuselela umdla ngakumbi kunye nobomi. Akukho nxalenye yomzimba womntu engahambelani kumandla athile kunye namandla kwinto enye okanye ezingaphezulu zehlabathi ezingabonakaliyo. Oko kubizwa ngokuba yi "caul" kunxulumene nomhlaba we-astral. Ukuba, xa umntu ezelwe kweli lizwe lokubonakalayo, ikholamu ihlala kunye naye iyangqisha okanye incamisa umzimba we-astral ngokuthambekela okuthile kwaye ifikelele kwihlabathi le-astral. Kubomi bexesha elizayo ezi mikhwa zinokoyiswa, kodwa zingaze zenziwe ngokupheleleyo, njengoko i-linga sharira, umzimba oyilo we-astral, idityaniswa ukuba ifumane umbono ovela kwisibane se-astral. Inkolelo yokuba abantu abahamba ngeenqanawa banamathele kolu xhobo, njengobuninzi bayo "bethamsanqa" okanye njengento yokugcina into yokuntywila, isekwe kwinto yokuba njengokhuselo kwilungu lesibeleko kwizinto ezingahambi kakuhle kulwangoko Umhlaba, kungathi kanti ngoku ukhuselekile kwihlabathi lempangelo ukhusele kwiingozi zamanzi ezingqinelana nokukhanya kwe-astral kunye nezinto, nangona zibizwa ngokuba zezokwenyama, azizo ezobugqi kwaye zivela kwilizwe le-astral.
Ukuba ingcinga idluliselwa kwingqondo yomnye, kutheni le ingenziwa ngokuchanekileyo nangobulumko obuninzi njengoko kuqhutywa ingxoxo eqhelekileyo?
Ayenzelwa kuba asithethi “ngokuthetha” ngengcinga; kananjalo asifundanga ulwimi lwengcinga. Kodwa nangoku, iingcinga zethu zidluliselwa kwiingqondo zabanye rhoqo kunokuba sicinga, nangona kungenziwa ngobukrelekrele ngendlela ebesinokuthetha ngayo kuba singanyanzelwanga yimfuneko yokunxibelelana omnye komnye ngokucinga kuphela, kwaye, kuba thina ayizukuthatha ngxaki ukufundisa ingqondo kunye neengqondo zokuyenza. Umntu ozalelwe phakathi kwabantu abakhulelweyo uyakhathalelwa, uqeqeshiwe, uqeqesha kwaye ufundiswe iindlela zabazali okanye isangqa azalelwe kuso. Yima kodwa ucinge, kwaye kuya kubonakala kwangoko ukuba kufuna iminyaka emininzi yokunyamezela kwinqanaba likatitshala kunye nokuzingisa ngokuzingisileyo kwinxalenye yomfundi ukuze afunde ubugcisa bokuthetha nokufunda nokubhala ulwimi, nokufunda imikhwa, amasiko kunye neendlela zokucinga zolo lwimi. Ukuba kufuna umgudu noqeqesho kweli lizwe lokubonakalayo ukuba lifunde ulwimi olunye, ayimangalisi into yokuba bambalwa abantu abakwaziyo ukudlulisa iingcinga ngokuchanekileyo ngaphandle kokusebenzisa amagama. Akusekho kobugqi ukugqithisa ingcinga ngaphandle kwamagama kunokuba kukugqithisa ingcinga kusetyenziswa amagama. Umahluko kukuba sifunde ukuyenza kwilizwe lokuthetha, kodwa sisahleli singazi nto njengabantwana abangathethiyo kwilizwe leengcinga. Ukudluliselwa kwengcinga ngegama kufuna izinto ezimbini: lowo uthetha, nalowo umamelayo; usulelo sisiphumo. Oku sikwazi ukuyenza, kodwa eyona ndlela sithetha ngayo nesiqondayo kunjengokwenzakalisayo kuthi njengokudluliselwa kwengcinga ngaphandle kwamazwi. Asazi ukuba kwenziwa njani kwaye njani kwaye njani amalungu ezahlukeneyo emzimbeni ukuze avelise isandi; Asazi ukuba yeyiphi na inkqubo isandi esithe sigqithiselwa sidluliselwa kwisithuba; asazi ukuba isandi sifunyanwa njani yi-tympanum kunye nerve yophicotho; okanye yinkqubo eyitolikwa kubukrelekrele ngaphakathi oqondayo umbono ohanjiweyo sisandi. Kodwa Siyazi ukuba yonke le nto yenziwe, kwaye siyaqondana emva kolunye uhlobo.
Ngaba ikhona into enomdla kwinkqubo yokudluliselwa kwengcinga?
Ewe. Iinkqubo ze-telegraphic kunye neefoto ziyafana kakhulu nokugqithiselwa kwengcinga. Kufuneka kubekho umqhubi odlulisa umyalezo wakhe, kufanele ukuba kubekho umntu owamkelayo oziqondayo. Ke ngoko kuya kubakho abantu ababini abaqeqeshwayo, abaqeqeshiweyo okanye abafundileyo ukuhambisa kunye nokwamkela iingcinga zabanye ukuba bayakwenza oko ngobukrelekrele nangokuchaneka okufanayo nokuqhubeka kwencoko eqondakalayo eqhelekileyo, njengoko abantu ababini kufuneka bekwazi ukuthetha ulwimi olufanayo ukuba banokuthetha. Kuyatshiwo ukuba abantu abaninzi bayakwazi ukuyenza le nto, kodwa bakwenza kuphela ngendlela engenangqondo kakhulu, kuba abazimiselanga ukuhambisa ingqondo kwikhosi engqongqo yoqeqesho. Olu qeqesho lwengqondo kufuneka lube ngolungelelwano, kwaye luqhutywa ngononophelo olukhulu, njengoko kunjalo nobomi bomfundi kwisikolo esinoqeqesho.
Singathetha njani ngokucinga ngengqondo?
Ukuba umntu uqaphela ngononophelo ingqondo yakhe kunye neengqondo zabanye, uyakuqonda ukuba iingcinga zakhe zigqithiselwa kwabanye yinkqubo ethile engaqondakaliyo. Lowo unokuthetha ngokucinga ngaphandle kokusebenzisa amagama kufuneka afunde ukulawula imisebenzi yengqondo yakhe. Njengoko imisebenzi yengqondo ilawulwa, kwaye umntu ekwazi ukubamba ingqondo ngokuzinzileyo kuwo nawuphi na umxholo omnye, kuyakuqondwa ukuba ingqondo iyalulawula uhlobo, ithathe imilo kunye nomlinganiswa wesihloko esiqwalaselweyo, kwaye kanye xa uhambisa lo mbandela okanye ingcinga kwinto ebhekiswe kuyo, ngokuvuma kwayo. Ukuba oku kwenziwe kakuhle, umntu obhekiswe kuye, uya kuyifumana. Ukuba akwenziwanga kakuhle kuya kubakho umbono ongekho mgangathweni malunga nokuba yintoni na loo nto yenziweyo. Malunga nokufunda okanye ukwazi iingcinga, imisebenzi yengqondo kufuneka ikulawulwe ukuba ingcinga yomnye iya kwamkelwa kwaye iqondwe. Oku kwenziwa ngendlela efanayo naleyo umntu oqhelekileyo onengqiqo emamela amazwi omnye. Ukuqonda ngokufanelekileyo umntu kufuneka aphulaphule ngenyameko kumagama awathethileyo. Ukumamela ngenyameko ingqondo kufuneka ibanjwe ngokusemandleni. Ukuba iingcinga ezingezizo zingena kwingqondo yomphulaphuli ingqwalaselo eyimfuneko ayinikiwanga, kwaye amagama, nangona eviwe, aqondwa. Ukuba umntu ufunda ingcinga yomnye ingqondo yakhe kufuneka igcinwe kwindlebe engenanto ukuze umbono wento edlulisiweyo ugcinwe ngokuchanekileyo nangokucacileyo. Ke ukuba loo ngcinga icacile kwaye yahlukile akunakubakho bunzima ekuyiqondeni. Ngokwenjenje siyabona ukuba ingqondo yokudlulisela ingcinga kunye nengqondo yomamkeli wengcinga zombini kufuneka ziqeqeshelwe ukuziqhelanisa, ukuba ukuhanjiswa kwengcinga kuya kuqhutywa ngokuchanekileyo nangokuqonda.
Ngaba kulungile ukufunda iingcinga zabanye nokuba bafuna ukuba benze njalo okanye akunjalo?
Ngokuqinisekileyo akunjalo. Ukwenza oku akuxoleli kwaye akunganyaniseki njengokuba kunjalo ukungena kwesinye isifundo kunye neranti kwaye ufunde amaphepha akhe abucala. Nanini na xa umntu ethumela ingcinga igcinwe isitampu ngobunye bomthumeli kwaye inomtsalane okanye utyikityo. Ukuba ingcinga yohlobo lo mthumeli engafuni ukuba lwaziwe, imposiso okanye utyikityo lomthumeli uyayiphawula ngokufanayo njengoko sinokuphawula imvulophu "eyimfihlo" okanye "eyomntu." Oku kubangela ukuba kungabonakali. kulowo ungathembeki ungangenisi ngaphandle kokuba ingcinga ivulekile ekumiselweni kwayo kwaye inxulumene nommisi. Ngumntu osebenzisa ubugqi bokwenyani, loo ngcinga ayinakufundwa okanye iphazanyiswe. Akwaba bekungasiso sithintelo konke oku kuya kuba ngabafundisi-ntsapho bamandla obugqi abanokwazi ukuba zizigidi ngezigidi ebusuku, kwaye, ngokunokwenzeka, bebeya kuphelisa imfuneko yokufumana imali ngexesha elingakanani kwisifundo okanye ukuhlala. Banokucaphukisa imarike yemasheya, benze ukuthembela kwimimoya nakwiimarike zehlabathi, kwaye bahlaselane bade bafumane ukuphela kwexesha, njengokuya "kwikati zaseKilkenny."